China Construction ngwá OTR rim maka Grader China OEM emeputa factory na-emepụta | Hygg
Gini bu akụrụngwa akụrụngwa?
Ihe owuwu ihe owuwu bụ otu ụdị OTR rimna-eji maka ewu ígwè dị ka backhoe Loader, grader, wheel Loader, articulated hauler wdg Anyị bụ ndị OEM OTR rim soplaya maka nnukwu aha dị ka katapila, Volvo, Liebherr, John Deere na XCMG. Kwa ọnwa, a na-etinye ọtụtụ iri puku HYWG OTR rim na CAT, Volvo, Liebheer na XCMG wheel loader, graders na haulers.
Olee otú ọtụtụ ụdị nke na-ewu ụlọ rim?
E nwere ụdị dị iche iche ihe owuwu ihe rims, kọwara ihe owuwu ihe owuwu akụrụngwa rim bụ mgbe 3-PC rim ma ọ bụ 5-PC rim, na-akpọkwa n'ebe-mpempe rim ma ọ bụ ise-ibe, ọ na-mere dị iche iche iberibe dị ka rim isi, mkpọchi mgbanaka, Flange, n'akụkụ mgbanaka na bead oche.
Nkọwapụta ya, ihe owuwu ihe rim nwere ike nkewa dị ka n'okpuru.
5-PC rim, nke a na-akpọkwa rim ise, ka a na-eme site na mpempe ise nke nwere isi rim, mgbanaka mkpọchi, oche bead na mgbanaka abụọ n'akụkụ. 5-PC rim bụkarị nha 36.00-25 / 1.5, 13.00-25 / 2.5, 19.50-25 / 2.5, 22.00-25 / 3.0, 24.00-25 / 3.0, 25.00-25 / 3.5, 13.00-33 / 2.5, elu ruo 19.50-49 / 4.0. 5-PC rim bụ arọ dị arọ, ibu dị arọ na obere ọsọ, a na-ejikarị ya eme ihe na ihe ndị na-ewu ihe, dịka ndị na-eme dozers, nnukwu ndị na-ebu wiil, ndị na-ekwu okwu, nnukwu gwongworo na igwe ndị ọzọ.
Kedu ihe akụrụngwa akụrụngwa eji?
Onu ogugu ndi eji ewu ewu maka ihe eji ewu ulo bu 12.00-25 / 1.5, 14.00-25 / 1.5, 17.00-25 / 1.7, 19.50-25 / 2.5, 22.00-25 / 3.0,24.00-25 / 3.0 na 25.00-25 / 3.5. HYWG OTR rim enwere ike iji ya maka ọtụtụ ngwa ihe eji ewu ihe dịka:
(2) Onye gụsịrị akwụkwọ
(3) Ugboro anọ
(4) Akwụkwọ edemede
14.00-25 / 1.5 3-PC 17.5R25 Nwamba 140M Akwụkwọ
14.00-25 / 1.5 3-PC 17.5R25 Ileba 521 Obere Wheel Ibu
17.00-25 / 1.7 3-PC 20.5R25 Nwam 938K Obere Wheel Ibu
17.00-25 / 1.7 3-PC 20.5R25 CAT924H Obere Wheel Ibu
17.00-25 / 1.7 3-PC 20.5R25 NXU 3030 Obere Wheel Ibu
17.00-25 / 1.7 3-PC 20.5R25 Ileba 721 Obere Wheel Ibu
17.00-25 / 1.7 3-PC 20.5R25 Volvo L70 / 90 Obere Wheel Ibu
17.00-25 / 1.7 3-PC 20.5R25 Komatsu WA270 Obere Wheel Ibu
19.50-25 / 2.5 5-PC 23.5R25 Nwam 972 N'etiti Ibu Ibu
19.50-25 / 2.5 5-PC 23.5R25 Ileba 821 N'etiti Ibu Ibu
19.50-25 / 2.5 5-PC 23.5R25 Volvo L110 / 120 N'etiti Ibu Ibu
22.00-25 / 3.0 5-PC 29.5R25 Nwam 966 N'etiti Ibu Ibu
22.00-25 / 3.0 5-PC 29.5R25 CAT980 G / H / K / M N'etiti Ibu Ibu
25.00-25 / 3.5 5-PC 29.5R25 Komatsu HM 400-3 N'etiti Ibu Ibu
25.00-29 / 3.5 5-PC 29.5R29 Nwam 982M Nnukwu Ulo Oru
27.00-29 / 3.0 5-PC 33.5R29 Volvo A60H Akwụkwọ akụkọ Hauler
Anyị uru nke ewu na ngwá rim?
(1) HYWG bụ pụọ n'okporo ụzọ rim dum ụlọ ọrụ yinye n'ichepụta enterprise.
(2) Anyị nwere ike ịnye ọ bụghị naanị rim zuru ezu kamakwa akụkụ rim dị ka mgbanaka mkpọchi, mgbanaka akụkụ, flanges na bead oche.
(3) Anyị nwere ọtụtụ ngwaahịa gụnyere ụlọ ọrụ mmepụta ihe 1-PC rim, eriri forklift, 3-PC rim na 5-PC rim, anyị nwere ike ịnye ụdị OTR niile.
(4) Àgwà anyị gosipụtara site na nnukwu OEM dị ka Caterpillar, Volvo, Liebherr, John Deere na XCMG.
(5) Ndị ọzọ karịa n'elu ndị ahịa OEM anyị nwekwara ike ịnye igwe OTR ndị a ma ama dịka Komatsu, Hitachi, Doosan, Bell na JCB.
Ngwaahịa OTR ọhụrụ anyị bụ 36.00-25 / 1.5 ezubere maka Volvo A25 / 30 maka ngwa ala dị nro na Europe.
Anyị na-eme taya na rim mgbakọ maka Volvo OE wheel loader.
Nke gara aga: OTR Rim mmiri dị iche iche site na 8 ″ ruo 63 ″
Osote: Mining rim China OEM emeputa size si 33 ″ ka 63 ″
Ngwá Ọrụ Ewu OTR rim maka edemede ...
Construction Equipment OTR rim maka wheel Loader ...